Lamaane 88 sano is-qabey oo guurkooda ku xusay sawiro dharka arooska iyagoo xiran – SBC
Lamaane 88 sano is-qabey oo guurkooda ku xusay sawiro dharka arooska iyagoo xiran
Posted by editor on November 26, 2012 Comments
Wu Conghan oo 101 sano jir ah iyo afadiisa Wu Sognshi oo 103 sano jir ah ayaa xus gaar ah u sameeyey sanad guuradii 88-aad ee guurkooda, iyagoo iska qaaday sawiro gaar ah oo ay ku labisan yihiin dharka sida gaarka ah loogu tala galay inay qaataan caruuska iyo caruusada.
Conghan &Wu Sognshi ayaa sheegay in xiligii guurkooda oo laga joogo 88 sano anaay u helin fursad in iyagoo dharka arooska qaba ay iska qaadaan sawiro, balse ay haatan u heleen fursad inay iyagoo dharkii arooska loogu tala galay gashan ay sawiro xusuus ah iska qaadaan.
Lamaanan da’adooda oo la isku darey ay dhan tahay 204 sano ayaa sanadkii 1924-kii waxay isku guursadeen gobolka Sichuan province ee dalka Shiinaha waxaana ay sheegeen inay sugayaan maalin uun iska qaadaan sawiro iyagoo sida lamaane aroos ah u labisan.
Lamaanahan oo niyadooda ku hayey in ay mar uun iska qaadaan sawiro ayaa waxaa riyadooda u hirgaliyey shirkad dhanak sawirada qaabilsan oo ku taal magaalada Nanchong i ee gobolka Sichuan ee ay lamaanahan ku nool yihiin.
Haji ciise says:
waa wax lagu farxo in dad ah ay weli sidaas isu jecel yihiin.